Home Wararka Farmaajo oo lagu soo oogay Dacwad ku saabsan Askarta ku maqan Eritrea
Farmaajo oo lagu soo oogay Dacwad ku saabsan Askarta ku maqan Eritrea
War-saxaafadeed uu soo saaray Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Aqalka Sare Abshir Maxamed Axmed (Bukhaari) ayuu ku sheega inuu hoggaamin doono dadaal lagu raadinayo xuquuqda askarta Soomaaliyeed ee ku maqan dalka Eritrea.
Wuxuu caddeeyay inuu o qoraal rasmi ah u gudbin doono Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka kana codsan doona in la furo kiis lagu baarayo laguna ogaanayo xaaladda ilmahaas oo klu baxay amarka madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Sida aan wada ognahay, waxaa jiray ubad Soomaaliyeed oo Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullahi Farmajo uu amray in la qoro loona qaado Dalka Eriteriya si ay tabobar ciidan oo qarsoodi ah ugu soo qaataan dalkaas.
Hannaanka qorista ciidankaasi waxaa loo maray qaab qarsoodi oo ka baxsan xayndaabka nidaamka ciidan qorista ee dastuuriga ah sida ku cad Qod.27aad “Muwaadin kasta oo Soomaali ah waxa uu xaq u leeyahay in uu ka qayb qaato jagooyinka iyo jaranjarooyinka darajo ee Ciidammada iyada oo aan la takooreyn, iyada oo la ilaalinaaya xuquuqda haweenka ee arrintan la xiriirta”.
Dhammaan ciidanka la qaaday waxaa loo qoray si qarsoodi ah iyada oo lagu faafiyay bulshada dhexdeeda dacaayad ah in ciidanka loo qorayo Dowladda Qatar oo soo codsatay, taas oo keentay in dhalinyaradu (18 – 25 sano) ay si qarsoodi ah isu diiwaangeliyaan kuna qanciyaan waalidkooda iyo eheladooda. Xitaa dadka qaar waxaa laga qaatay lacago si ilmahooda loogu daro liiska ciidankaas.
Marna ma jirin ogeysiin rasmi ah oo ka soo baxday talisyada ciidamada ama wasaaradaha amniga gudaha iyo gaashaandhigga. Sidaas daraadeed, ilaa iyo hadda lama garanayo nooca ciidan ee ay yihiin iyo ujeeddada ciidankaasi loo qaaday.
Haddaba, waxaa jira warar la xaqiijiyay oo tilmaamaya in ciidamadaasi la geeyay gobolka Tigray ee Ethiopia waxaana ugu dambeeyay warbixinta sannadlaha ah ee uu soo saaray u-qaabilsanaha xuquuqda aadanaha ee Hay’adda Qaramada Midoobay kuna saabsan xaaladda xuquuqul insaanka ee Eriteriya, Mohamed Abdelsalam Babiker.
Warbixintan waxaa loo jeedinayaa fadhiga guud ee Golaha Xuquuqul Insaanka Hay’adda Qaramada Midoobay: “Waxaa i soo garay xog sheegaysa in ciidamada Soomaalida laga qaaday xeryaha ay tabobarka ku qaadanayeen lana geeyay goobaha dagaalka ee Gobolka Tigray iyaga oo la socday ciidamada Ereteriya”.
1. Mar haddii hannaankii lagu qaaday ciidanka aysan waafaqsaneyn sharciga Dalka u yaalla.
2. Mar haddii ay isa soo tarayaan warbixinnada gaboodfalka loo geystay carruurta Soomaaliyeed. • Mar haddii Xafiiska Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ay sida aan kor ku soo sheegay uga hadleen xaaladda.
3. Mar haddii laga jawaabi waayay baaqyadii siyaasiyiinta iyo goleyaasha Dowladda lana dhageysan waayay codsiyadii ka imaanayay waalidiinta Soomaaliyeed ee carruurtoodu ka maqan yihiin muddo ku dhow labo sano.
Xitaa kuwa mar soo hadlay – sida la sheegay – lama garanayo in lagu khasbayay iyo in kale in ay u hadlaan sida dad aan dhibaato qabin.
Waxaa nala gudboon in aan qaadno tallaabooyinka soo socda:
1. Aniga waxaan hoggaaminayaa dadaal lagu raadinayo xuquuqda ubadkaas Soomaaliyeed aniga oo qoraal rasmi ah u gudbin doona Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka kana codsan doona in la furo kiis lagu baarayo laguna ogaanayo xaaladda ilmahaasi iyada oo la qaadayo dhammaan tallaabooyinka uu sharcigu tilmaamay.
2. In waalidiinta Soomaaliyeed ay raadsadaan ubadkooda iyaga isticmaalaya xaquuqdooda dastuuriga ah ee la xiriirta helidda xog kasta oo ay hayso Dowladda sida uu xeeriyay Qod.32aad ee Dastuurka KMG ah:
• Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo macluumaadka ay Dawladdu hayso.
• Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay helitaanka macluumaadka ay cid kale hayso oo loogu baahan yahay in lagu fuliyo ama lagu ilaaliyo xuquuq kastoo kale oo daw loo leeyahay.
3. Dhammaan siyaasiyiinta, Shacabka Soomaaliyeed, hay’adaha xuquuqul insaanka ee ka howlgala Soomaaliya in ay u istaagaan sidii loo heli lahaa carruurtaasi ku maqan Amarka Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday si loo badbaadiyo intii ka hartay ubadkaasi.